Carlsberg ebe omume biya na Copenhagen | Akụkọ Njem
Carlsberg ebe omume biya na Copenhagen
Maria José Roldan | | Denmark, Gastronomy
Hena na n’ani begye ho sɛ obetie saa asɛm no? Beer bụ ihe ọ drinkụ drinkụ nke anyị na ya nọrọ kemgbe ọtụtụ narị afọ, ọ bụkwa na mmadụ ole na ole anaghị a itụ ya n'ihi na ha enweghị mmasị na uto ya.. Taa, e nwere ọtụtụ ụdị biya dị iche iche ịhọrọ. ọ bụkwa na naanị ị ga-abanye ụlọ ahịa ọ bụla iji ghọta ya.
Mana ma eleghị anya ị maara Carlsberg biya ma cheta ụfọdụ n'ime mgbasa ozi ya siri ike ichefu dị ka nke maka biker na sinima. Ma na mgbakwunye na mgbasa ozi ya na ahịa ya, Carlsberg bụ biya na-amasịkarị ọtụtụ maka ọnụahịa ya na ụtọ ya pụrụ iche.
Mgbe ị dị obere, ejiri m n'aka na ị gara ụlọ ọrụ kuki, buns, yogọt ma ọ bụ ụdị nri ọ bụla ọzọ ... n'onwe m ka m na-echeta otu m si hụ ọbịbịa nke ụlọ ọrụ Donut ebe m nwere nnukwu oge na naanị ịnụ ísì ọma nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe mere ka ị maa abụba. Ma, ị nwere ike iche n'echiche gafere otu ahụmahụ ahụ ugbu a mana ịnwe ohere ịme ya na mmewere ọzọ nke yikarịrị ka ọ ga-amasị ọtụtụ ma ọ bụ karịa karịa Donuts? Echere m biya!
Ọ bụrụ n’ịbu n’uche ị ga njem njem na Copenhagen na ezumike gị, mgbe ahụ ị ga-enwe ọbịbịa kariri iwu na Carlsberg Brewery. Will ga-enwe ike ịmara ọtụtụ ihe gbasara biya a ma nwekwaa oge dị ezigbo ụtọ. Want chọrọ ịmatakwu?
1 Carlsberg ebe omume biya
2 Ozi nkowa mgbakwunye maka obia
3 Maka ozi ndị ọzọ
Carlsberg ebe omume biya
M ka na-echeta ọmarịcha ụzọ biya ha haziri anyị site na Officelọ Ọrụ Njem Nleta Copenhagen, na nzube nke mara Carlsberg ebe omume biya nke dị n'isi obodo Denmark. Brelọ ọrụ ebe a na-emepụta ebe a, nke JC Jacobsen hiwere na 1847, bụ otu n'ime nleta dị mkpa ị kwesịrị ime n'obodo ahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị hụrụ mmanya a n'anya ma ọ bụ na ịchọrọ ịhapụ njem nleta.
Taa ọtụtụ n'ime mmepụta nke Carlsberg biya sitere n'ebe ọzọ na Denmark, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị na Copenhague. Ọbịbịa ị ga-aga n'ụlọ ọrụ a ga-akpọrọ gị ịmatakwu banyere akụkọ ihe mere eme nke biya a, usoro mmepụta ya yana ị nwekwara ike ịga na ngosipụta ya nke igwe, karama na ihe ndị ọzọ chọrọ ịmata ya.
Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-ahụ nchịkọta kasị ukwuu nke karama biya na ụwa, gụnyere karama Carlsberg na ndị ọzọ sitere na ụdị dị iche iche. Edere nchịkọta a na Guinness Book of Records na 2007, na-aza mkpokọta karama 16.384. Site na 2007 rue ugbu a enwere m ike ijide gị na nchịkọta a amụbaala n'ọnụ ọgụgụ, nke na-adọrọ mmasị n'ezoghị ọnụ.
N'akụkụ nchịkọta a, ụlọ ọrụ mmepụta ihe nwere ogige a kpụrụ akpụ, usoro ọrụ nka nke Carls Jacobsen, nwa nke onye nrụpụta ụlọ ọrụ ahụ. N'etiti ihe osise ndị a bụ obere ụdị nke ndị a ma ama Little Mermaid nke Copenhagen. Ọ bụkwa kpomkwem Carl Jacobsen bụ onye haziri ma kee ihe oyiyi mbụ ahụ, mgbe ọ hụrụ onye na-agba egwu n'anya nke gafere Copenhagen na-agba ballet nke Little Mermaid.
Ma enwere ọtụtụ ebe nkiri n'ime ụlọ ọrụ ahụ, dị ka ebe obibi ya, ebe ị nwere ike ịhụ ịnyịnya Jutland, ịnyịnya nke ụlọ ọrụ a na-ebubu ma na-ere ngwaahịa ya.
Ọbịbịa ahụ na-agwụ, olee otú ọ ga-esi bụrụ ihe ọzọ, na Jacobsen Brewhouse Ogwe, ebe i nwere ike ịnụ ụtọ biya biya Carlsberg.
Ozi nkowa mgbakwunye maka obia
Ihe ngosi ndi puru iche na ihe nlere anya na emekorita gi gha eme gi njem site na onu ogugu buru ibu na uwa, i gha amuta banyere akuko ya na ihe nile banyere Carlsberg. Cheta ileta ogige a kpụrụ akpụ, stables na ụlọ ahịa ihe ncheta. Njegharị ahụ ga-ejedebe na mmanya dị na ala mbụ nke ebe omume biya ahụ, ebe ị ga-enwe ohere ịnwale ụfọdụ ngwaahịa ndị ị gbalịrị ruo ugbu a.
Ọbịbịa ahụ nwere ike ịdị ihe dị ka otu awa na ọkara iji hụ ihe niile nke ọma. Factorylọ ọrụ ahụ na-enye echiche na ị gaghị abịarute karịa elekere 14.30:XNUMX nke ehihie ka ị nwee oge iji hụ ihe niile.
Gwọ tiketi ahụ gụnyere biya abụọ ma ọ bụ ihe ọ softụ softụ dị nro ị nwere ike ịnweta ma ị gụchaa njem nleta nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Oge:Thelọ ọrụ a na-emeghe site na Tuesday ruo Sunday site na elekere 10.00 nke ụtụtụ ruo elekere 17.00 nke ụtụtụ, na-emechi Monday ọ bụla na Christmas, Afọ Ọhụrụ, Disemba 24, 25, 26 na 31. Lọ ọrụ tiketi na-emechi na 16.30 pm.
Ahịa:Ntinye bụ 65 DKK maka ndị okenye (nke gụnyere biya abụọ maka uto), 50 DKK maka ndị na-eto eto n'etiti 12 na 17 afọ, yana n'efu maka ụmụaka n'okpuru afọ 11. Ugbu a 1 euro dị ka okpueze Danish 7,45.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu ozi ileta ebe a na-eme biya na Carlsberg, ị nwere ike tinye websaịtị ha wee chọta ozi niile ịchọrọ iji wee mee ya nleta pụrụ iche. M na-adụ gị ọdụ ịde akwụkwọ tiketi gị tupu oge eruo ka ị ghara ịkwụsị tiketi na karịa ihe niile, ka ị nwee ike ịnwe oge ịhazi njem ahụ ma ọ bụrụ na ị ga-esi ebe dị anya.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ ị nwekwara ike izipu email na ọbịa@carlsberg.dk ma ọ bụ kpọọ +45 3327 1282 ebe ha ga-enyere gị aka ma ị ga-enwe ike ịza ajụjụ ọ bụla ị nwere iji hazie nleta gị.
Na mgbakwunye, site na web ị ga-enwe ike ịmata ngwaahịa ahụ nke ọma, marakwuo banyere ha, mara adreesị ma ọ bụ chọta nọmba ekwentị ndị ọzọ ma ọ bụ ozi ịntanetị iji kpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ.
Mgbe ị gụchara ozi niile gbasara Carlsberg Brewery… kedu ihe ị na-ele anya kachasị? Iji hazie njem na Copenhagen ma gaa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ gaa ịzụta biya biya Carlsberg ma drinkụọ ya oyi? Dee nyocha gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Denmark » Carlsberg ebe omume biya na Copenhagen
6 ihe ịhụ na Rome na a izu ụka
Otu esi eme ubochi Valentpo na Madrid na Barcelona